Ukuphindaphindwa kwe-GIS-Iphepha 3 -Geofumadas
GIS software - echazwe 1000 amagama
Kwinyanga ephelileyo kaMeyi, uguqulelo 1.2 lolu xwebhu lufutshane kodwa luncomekayo lwapapashwa oluthi ngeli gama libonakale lihlekisa ngokuba isoftware inzima kangakanani ukulawula idatha yendawo. Kubhaliwe nguStefan Steiniger noRobert Weibel weDyunivesithi yaseCalgary eCalifornia kunye neDyunivesithi yaseZurich ngokwahlukeneyo. ...
I-10 Geofumadas kunye nesinconywa
Kule veki ndizakuba sendleleni kwakhona. Ndikushiya ufundisiso ezili-10 ngelixa ndibuya ... oh, kunye nengcebiso. Malunga netekhnoloji uHugo Chavez woyika imouse yeCentromujer, Ibhlog enkulu yabasetyhini izelwe. Kwaye luyilo olunjani! I-LULA, isoftware yasimahla kwiiyunivesithi zaseSpain Malunga neGeospatial Software GeoViewer 3.0, umbukeli wasimahla weLizardtech…
Blog Umhlaba ka-Google GIS asibonise egeomates My
Imibuzo kwi-AdSense yentengiso
Malunga neAdWords kunye neAdSense AdWords yinkqubo esetyenziswa nguGoogle ukubonisa iintengiso, iinkampani zihlawula, nokuba kungokucofa, ngokucofa okanye isenzo ngasinye; Ngelixa iAdSense yinkqubo esetyenziswa ngabanini bendawo kwiintengiso eziza kuboniswa. Ke, iintengiso ozibonayo ngentla kwesi sithuba ...
Blog Umhlaba ka-Google GPS GvSIG OS GIS asibonise shp
Internet kunye neBlogs, Ukugcinwa kweeblogi
IPrototype yeZiseko zoLwazi lweDatha yaseGuatemala elungiselelwa nguNobhala Jikelele woCwangciso kunye neNkqubo yoBongameli be-SEGEPLAN inomdla. Sibonile kumboniso wevidiyo kaMoisés Poyatos noWalter Girón waseSITIMI ngomhla we-4. iinkomfa ze-gvSIG; Ekupheleni kwengcaciso bachaze ukuba ii-IDE zazi ...
Kudala ndisebenzisa iNetbook, ngenxa yokuhamba kwam rhoqo ndiye ndagqiba kwelokuba ndizame ukususa i-HP Pavillion kwaye ndenze umsebenzi onzima kumatshini weofisi. Umva wam uyonwabile, amehlo am awahlali. Iinkqubo: Kwi-GB ye-RAM inayo, kuba ngoku yanele ngokusetyenziswa kokukhanya, akukho ...
Acer balangazelela Blog Umhlaba ka-Google GIS asibonise
Kuhlala kukho into izixhobo zeenkampani ezinkulu ezingenzi kakuhle kakhulu, koku basebenzise ezincinci ukwenza izisombululo ezihlangabezana neemfuno zabathengi, ngokubanzi babenjalo. Ukuba lishishini elilungileyo okanye akunjalo, imodeli inomdla, bahlala baya kwiinkomfa zonyaka ukukhuthaza iimveliso okanye iinkonzo zabo; imemori…
ezintsha, GIS asibonise, Microstation-Bentley, egeomates My
Ngexesha elidlulileyo bendikuxelela ukuba I-Manifold inokuqhagamshela kuGoogle, Yahoo kunye noMhlaba oBonakalayo. Ngoku isinxibelelanisi sokudibanisa neeMephu zeSitrato esivulekileyo (i-OSM) siphumile, esithe senziwa ngendlela kwiC # ngumsebenzisi weforum obizwa ngokuba yiJkelly. Iindaba zivele kule veki kwiforum yeziNinzi, apho ...
Xhuma i-Microstation V8i ngeenkonzo ze-WMS
Ngexesha elithile elidlulileyo sabonisa indlela yakudala yokuba kunokwenzeka njani ukuba uqhagamshele kwiinkonzo ze-OGC usebenzisa iMicrostation, ndiyakhumbula uKeith wandixelela ukuba uhlobo olulandelayo luya kuba nakho oku. Qhagamshela ukufikelela, kuhlala kusenziwa ngomphathi we-raster ngoku, ukongeza kwifayile ye-raster kunye nenkonzo yemifanekiso, ukhetho lwemephu yewebhu luyavela ...
Bentley Systems Umhlaba ka-Google GvSIG OS GIS asibonise
Geospatial - GIS, GvSIG, GIS asibonise, Microstation-Bentley
Umqulu we-GIS eneendlela ezininzi zokusetyenziswa komasipala
Ngexesha elidlulileyo bendikhe ndakhankanya ukuba ndisebenza kwimanyuwali yokuphumeza iiNkqubo zoLwazi lweJografi ndisebenzisa i-Manifold GIS. Emva kokukwazisa, uninzi lwaluthethile ukuba banomdla wokwazi uxwebhu, ke ngenxa yolu hlobo lwenyathelo kufuneka libhengezwe ukuze abanye balisebenzise, ​​baphucule kwaye banike ingxelo, apha ...
Blog Umhlaba ka-Google GIS asibonise
cadastre, Ukufundisa i-CAD / GIS, Geospatial - GIS, GIS asibonise
Ukuba bekufuneka ndicebise iposti enye ngenyanga, oku bekuya kuba sisiphumo ngoJuni 2007 UGoogle uMhlaba walitshintsha njani ilizwe lethu? Julayi kaJulayi kuGoogle Earth yokusetyenziswa kweCadastre? Agasti Ibali lothando lwe-geomatics Septemba Imifanekiso yeGoogle Earth ichaneke kangakanani ngo-Okthobha uqikelelo olungasekelwanga kwisiseko ngoNovemba AutoCAD kunye…
Umhlaba ka-Google GPS GIS asibonise egeomates My
Geospatial - GIS, egeomates My
Ubomi bam kunye nokuhamba kwam, kunzima ukuqonda umahluko phakathi kwawo. Kukuphi uxhulumaniso lweIntanethi oludandathekisayo oluvela kwikhefi, nazi ezinye izinto ezifundwayo kubhabho lokutya okunempilo ngaphambi kokuba ubhiyozele uSuku loTata nabantwana bam. Umbono weGoogle Earth Street View, eNgilani, Holland naseSpain Zaragoza ...
Namhlanje, ngo-Matshi 16, Manifold wenze ukukhutshwa kweendaba, apho athetha khona ngokubaluleka kwento eveliswayo yenguqulo 9. Ngokwento abayithethileyo, i-Manifold GIS 9 izakuya kwintengiso kwisiqingatha sokuqala sika-2009, kwaye uChris sele ethethile ngayo ...
Ukuthelekiswa kweArgGIS kunye ne-GIS ye-Manifold
Kuphela ngumsebenzi we-titanic owenziwe ngumsebenzisi oPhindaphindiweyo ogama lingu-tomasfa kwaye ulayishe iqonga leso sixhobo. Undikhumbuza loo msebenzi ngu-Arthur J. Lembo xa wayesenza umsebenzi ocwangcisiweyo wokwenza indlela yesiqhelo efanayo ne-ArcGIS kunye ne-Manifold. Ngaphezulu kokuthelekisa kundibizile ...
ArcView GPS GIS asibonise
I-GIS Imbonakalo yokudala izakhiwo zokushicilela
Kule posi siza kubona ukuba siyenza njani imephu yokuvelisa okanye into esiyibiza ngokuba sisakhiwo sisebenzisa i-Manifold GIS. Imiba esisiseko Ukwenza uyilo, Manifold ivumela igama ledatha ukuba lilungiswe, okanye njengoko imephu yaziwa, nangona inokuba ngaphakathi kwifolda okanye inxulunyaniswe nolwaleko okanye enye into ...
Enye iphrojekthi ijoliswe ku-gvSIG
Namhlanje bendinentlanganiso enesiseko esibaluleke kakhulu kwingingqi ye-Central America, kwaye ndonwabile kakhulu kukwazi ukuba batyikityele ukukhuthaza i-gvSIG kusetyenziso lukamasipala. Ndibhekisa kwiSiseko esijolise kuPhuhliso lukaMasipala, iziko elikhona ukusukela ngo-1993 kwaye eliye lakhula ...
Ikhasi langaphambili Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 ... Page 9 kwiphepha elilandelayo